7 atụmatụ uPVC dị elu kọlụm atụmatụ ịmara - Ọkpụkpọ Vinyl - Vinylpipe
Ọrụ nchịkwa mmiri na -eji nfuli na -emikpu mmiri na -adabere na paịpụ kọlụm iji napụta mmiri n'ime olulu mmiri nke ọma. Dị ka nke a, ịhụ ịdị mma nke ọkpọkọ kọlụm ndị a dị ezigbo mkpa. Kedu ebe uPVC kọlụm ọkpọkọ bata n’egwuregwu.
Ọkpụkpọ Vinyl nwere ngwongwo na -enweghị ọla nke na -eme ka ha na -eguzogide corrosion, nchara na mmeghachi kemịkalụ, nke na -ahụ maka nnyefe mmiri dị elu, mgbe niile!
Na Vinyl, anyị na -elekwasị anya n'inye ndị ahịa anyị ihe kacha mma ma na -adigide ọkpọkọ uPVC iji bulie itinye ego ha na njikwa mmiri.
Ka anyị leba anya na atụmatụ 7 dị mkpa nke ọkpọkọ kọlụm uPVC, nke na -enyere aka mee ka ọrụ ụlọ ọrụ mgbapụta rụọ ọrụ nke ọma, dị irè ma na -adịgide.
1. Enweghị nchekasị
Iji hụ na ogologo ndụ na ume nke ọkpọkọ riser anyị na ọrụ olulu mmiri gị, anyị na-etinye usoro mgbakwụnye ọkụ na usoro ọkụ. Nke a na-ewepukwa nchekasị dị n'ime ngwaahịa a, na-eme ka ọ ghara inwe nchekasị. A na -emezi ihe ndị na -arụ ọrụ nke ọkpọkọ kọlụm, na -eme ka ha na -adịgide adịgide ma na -adịkarị mfe maka nrụgide mpụga.
2. Nhazi ihu abụọ
Ịmụ mkpa maka ọkpọ ọkpọ na-eguzogide mmetụta dị elu na ọrụ njikwa mmiri gị, anyị etinyela ọtụtụ afọ na nyocha na mmepe wee mepụta ọkpọkọ nwere nhazi ihu abụọ. Nkà na ụzụ nke Vinyl na -abawanye ike ọdụdọ ọkpọkọ ma na -ebelata uto nke mgbawa, na -eme ka ọ ghara ịdị na -enwe mmetụta dị elu. Nke a na -enye ohere ka olulu mmiri gị rụọ ọrụ nke ọma ogologo oge karịa ọkpọkọ ígwè !.
3. Nhazi nhazi pụrụ iche
Site na itinye teknụzụ, usoro na akụrụngwa ọhụụ, anyị uPVC ọkpọkọ A na -ewu ya site na iji ihe nrụpụta pụrụ iche iji nagide nrụgide hydrostatic nke ime yana ibu mpụga nke kọlụm na mgbapụta ahụ. Nke a na-eme ka ojiji ha dị mma n'ọrụ gị ruo ogologo oge, ọbụlagodi mgbe ịtọpụsịrị ma ọ bụ mechie eriri ọkpọ ugboro ugboro, na-eme ka ha dịruo ihe karịrị afọ iri ise.
4. Ngwa ibu abụọ
Dịka e kwuru, ọkpọ ọkpọ ga -anagide nnukwu nsogbu na ibu, ma n'ime ma n'ahịrị. Karịsịa n'ihe banyere ọkpọkọ mbụ ejikọtara na mgbapụta gị, ọ nwere ike ihu ruo 35 kg/cm2 nke nrụgide hydrostatic.
N'otu aka ahụ, ọkpọkọ kachasị elu ga -akwado ịdị arọ nke ọkpọkọ ọkpọ niile na -enye mmiri, yana mgbapụta, nke nwere ike ịga ihe ruru tọn abụọ. Ya mere, ngwa ibu abụọ, nke bụ ihe pụrụ iche nke ọkpọkọ vinyl, na-enye ohere ka ọrụ mgbapụta mmiri gị guzogide nrụgide a ogologo oge.
5. Teknụzụ mkpọchi ike
Nchedo na nchekwa nke ọrụ olulu mmiri zuru oke dị ezigbo mkpa. Iji mee ka ịchekwa usoro a, a na -enye ọkpọkọ uPVC anyị site na teknụzụ mkpọchi ike nke na -ebu ibu axial na ibu torque, yabụ na -ewusi ihe owuwu borewell dum ike.
6. 100% Enweghị mwepu
Iji mee ka ọkpọkọ ndị na-eguzogide mmiri ghara ịpụ, a kwụnyekwara ha na O-mgbanaka na teknụzụ LPR. Ejikọtara ya na sistemụ mkpọchi ike, ha na-ahụ na ọkpọkọ ahụ enweghị mgbapụta 100%. Yabụ site na iji uPVC dobe ọkpọkọ, ọrụ njikwa mmiri gị nwere ike belata nsị na mkpofu mmiri.
7. Ejighị ígwè na-enweghị isi na ịdị arọ
Pipe uPVC bụ ihe na-enweghị isi na ọla dị arọ, nke na-eme ka ha na-eguzogide ọgwụ nchara yana mmeghachi kemịkal. Nke a na -enye gị ohere ịnapụta 100% ịdị ọcha na mmiri dị mma maka oriri, site n'ịhụ na usoro nnyefe dị elu.
Na -atụ aro Gụọ
Ị ka na -eji ọkpọ GI ochie ndị ahụ na -ata nchara n'ụzọ dị mfe?
Akụkụ ndị a dị mkpa nke ọkpọkọ kọlụm uPVC na -eme ha kacha mma n'ahịa maka mkpa njikwa mmiri gị.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ịdịte aka, arụmọrụ, ịdị mma na arụmọrụ ka mma, elela anya karịa Vinyl. Ịwụnye ọkpọkọ uPVC riser anyị nwere ike inye aka ịbawanye uru gburugburu ebe obibi na ego nke ọrụ njikwa mmiri gị!
Ị nwere mmasị ịmatakwu banyere ọkpọkọ kọlụm uPVC anyị?
Download ndepụta ngwaahịa maka ozi ndị ọzọ.